Nepal Auto नेपाल भित्रिने प्रतीक्षामा अब फक्सवागन टाइगुन, कति पर्ला मूल्य ? - Nepal Auto
नेपाल भित्रिने प्रतीक्षामा अब फक्सवागन टाइगुन, कति पर्ला मूल्य ?
काठमाडौं – जर्मन अटो मेकर फक्सवागनको बहुप्रतीक्षित टाइगुन एसयूभी भदौ मध्यसम्ममा नेपाल भित्रिने बताइएको छ । नेपालका लागि आधिकारिक बितरक पूजा इन्टरनेसनल नेपाल स्रोतका अनुसार अगस्ट महिनामा यो एसयूभी भारतीय बजारमा सार्वजनिक गरिने र त्यस लगत्तै नेपाल भित्र्याइने छ ।
भारतीय बजारमा सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालमा पनि यसको बुकिङ खोलिने र त्यसको केही समय लगत्तै ग्राहकलाई डेलिभरी दिइने स्रोतले बताएको छ ।
भारतीय प्लान्टमा उत्पादन भइरहेको यो एसयूभीका लागि भारत भित्रै अत्यधिक माग भैरहेको छ । भारतीय प्लान्टमा उत्पादन हुने भएपनि यसको गुणस्तर भने युरोपियन स्ट्यान्डर्डकै रहने कम्पनीले यसअघि नै बताइसकेको छ ।
भारतीय बजारमा १० देखि १७ लाख भारतीय रुपैयाँ मूल्य पर्ने अनुमान लगाइएको यो एसयुभी नेपाल भित्रिंदा ५५ देखि ७० लाख हाराहारी मूल्य पर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । कम्फर्ट, हाईलाइन र टपलाइन गरी भिन्न ३ भेरिएन्टमा उपलब्ध रहने टाइगुन म्यानुअल र अटोमेटिक गरी दुईवटै ड्राइभिङ अप्सनमा उपलब्ध हुनेछ ।
यो एसयूभीमा फक्सवागन आफैले विकास गरेको र पछिल्लो प्रविधिमा आधारित १.० टीएसआई इन्जिन जडान गरिएको छ । जुन अत्यधिक शक्तिशाली र मबजुत मानिन्छ ।
१ हजार सीसी क्षमताको इन्जिन जडान भएपनि यसले दिने पावर र टर्क भने प्रतिस्पर्धी ब्रान्डका सोही सेग्मेन्टका गाडीमा प्रयोग हुने १ हजार ५ सय सीसी क्षमतायुक्त एमपीआई इन्जिन बराबरको छ । टाइगुनको अधिकतम पावर ११५ बीएचपी र टर्क १७८ एनएम रहेको छ ।
यो गाडीलाई अत्याधुनिक र सुबिधासम्पन्न बनाउन कम्पनीले यसमा भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिट, डिजिटल ड्राइभर डिस्प्ले, सनरुफ, वायरलेस चार्जिङ, १० इन्चको टचस्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, अटो एसी, फ्ल्याट बटम स्टेयरिङ ह्विल र १७ इन्चको ड्युअल टोन अलोय ह्विलजस्ता फिचर्स समाबेश गरेको छ । त्यसैगरी ६ वटासम्म एयर ब्याग र इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल जस्ता फिचर्स थप गरिएको छ ।
नेपाल भित्रिएपछि यसको सिधा प्रतिस्पर्धा हाल बजारमा कारोबार भैरहेका हुन्डाई क्रेटा, किया सेल्टोस, सुजुकी एसक्रस, रेनो डस्टर र निसान किक्स लगायत एसयूभीसँग हुनेछ ।
शिकागो अटो शोमा कल, म्यासेज र डेटा एक्सेस भएका कार
अमेरिकामा कोभिड–१९ को महामारी पछि पहिलो पटक शिकागो अटो शो आयोजना भएको छ ।...